Need for Speed Most Wanted 1.3.128 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.3.128 လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား ၿပိဳင္ပြဲ Need for Speed Most Wanted
Need for Speed Most Wanted ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Google ကအထူးကမ်းလှမ်းချက် Play - သာကန့်သတ်အချိန်များအတွက်ပယ် 80% ကျော်ရယူပါ!
"ဒါဟာသူ့ရဲ့အစွမ်းကုန်န့်သတ်ချက်မှမိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းတွန်းနှင့်ပင်တစ်ချွေးကိုချိုးဖျက်မပါဘူး" (Capsule ကွန်ပျူတာ)
** GAME ALERT ** The Simpsons Play ™: ထဲကပုတ်။ ဒီနည်းကို GAME ဘဝကို-RUININGLY FUN IS! အခမဲ့ Springfield အသက်ရှူခြင်း, သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လူနေမှု Create! http://bit.ly/YynjyU
တက် Buckle, ဓာတ်ငွေ့ထိမှန်နှင့်တင်းကျပ်စွာအပေါ်ကိုင်; သင်သည်သင်၏အသက်တာ၏စီးနင်းဘို့အတွက်ပါပဲ။ ရဲများက Outrun ပြိုင်ဘက် outsmart - နှင့်သင်၏မိတ်ဆွေများ outdrive - မြန်နှုန်းများအတွက်အန္တရာယ်အရှိဆုံးလိုအပ်နေသောူပည်သူသေး။ သင်အများစုဟာ Wanted ဖြစ်ဝံ့သလား?
** မြန်နှုန်းအဘို့လိုအပ်အများစုဟာ Wanted တခုနက်ရှိုင်းမြင့်မားသောအရည်အသွေးဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ device ကိုအပေါ်တစ်ဦး 550MB + download နှင့်အကြမ်းအားဖြင့် 1,900MB + အခမဲ့အာကာသလိုအပ်သည်ကိုသတိပြုပါ။ အမှုအရာအရှိန်မြှင့်ရန်, ကျနော်တို့ Wi-Fi ချိတ်ဆက်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ **
သငျသညျလမ်းပြိုင်ကားသမားနှင့်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေစဉ်မဆုတ်မနစ်ကြိုးစားတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ရှောင်။ အ SRT Viper GTS တူပူကားတွေ, Porsche 911 Carrera S ကို, Hummer H1 အာလဖနှင့်များစွာသောပိုပြီးလူမျိုးနှင့် လိုက်. ။ မိုဘိုင်းပေါ်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အလက်တွေ့ကျကျနဲ့ full-ကားပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူမဘရိတ်-ခွင့်ပြုလမ်းပြိုင်ကားများ၏ပြင်းထန်မှုခံစားရတယ်။
အ Wanted List ကိုစစျဆေးနှင့်အများစုမှာပလက်ဖောင်းတစ်လျှောက်နှင့်သင်၏မိတ်ဆွေများအကြား Wanted သောသူသည်အထဲကရှာတွေ့မှမူလအစသို့ Log ။ ထို့နောက်သင်၏မိတ်ဆွေများကိုစိန်ခေါ်နှင့်မရပ်မနားပြိုင်ဆိုင်မှု၌သင်တို့၏ပြိုင်ကားကျွမ်းကျင်မှုသက်သေပြဖို့။
•ကမ္ဘာပေါ်တွင်အများဆုံးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကား 40 ကျော်မောင်းနှင့် customize
•သင်ချင်တဲ့လမ်း Racing! လူကြိုက်များဝယ်လိုအားအားဖြင့်, သင်သည်ယခုခုတ်မောင်းဖို့မထိသို့မဟုတ်စောင်းနိုင်
•အသုံးပြုမှု Mods သင့်ကားမြှင့်တင်ရန်နှင့်စတိုင်မတိုင်မီ pack ကို၏ရ
•တစ်ဦးသီးသန့်အများစုဟာ Wanted တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနောက်ခံပုံနှင့်အတူသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုထုတ် Tricks
သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ထိပ်မှရတဲ့ထံမှသင်တို့ရပ်တန့်ဖို့သူတို့လုပ်နိုင်အရာအားလုံးပွုပါမညျ - ဒါပေမယ့်ဒီလောကထဲမှာသာအများစုမှာ Wanted တယောက်မျှမရှိစေနိုင်ပါတယ်။
အရေးကြီးစားသုံးသူပြန်ကြားရေး။ ဒီ app: အင်တာနက်ကိုတိုက်ရိုက်လင့်ခ်င်; (အသေးစိတျအဘို့အသီးသန့်လုံခြုံရေး & Cookie ပေါ်လစီကြည့်ပါ) တတိယပါတီ analytics နည်းပညာကိုတဆင့် data တွေကိုစုဆောင်း။
Need for Speed Most Wanted အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Need for Speed Most Wanted အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Need for Speed Most Wanted အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Need for Speed Most Wanted အား အခ်က္ျပပါ
လိုင္စင္ လိုအပ္သည္ 57
piratetime စတိုး 6.23k 882.09k
Need for Speed Most Wanted ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Need for Speed Most Wanted အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.3.128
Need for Speed Most Wanted APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ